Yakakurudzirwa Mabhuku eKudonha: Iwo Anopisa Zvinyorwa | Zvazvino Zvinyorwa
Yakakurudzirwa mabhuku ekuwa
Juan Ortiz | 04/10/2021 18:02 | Yakagadziridzwa ku 14/10/2021 15:15 | Vanyori, Mabhuku, Nyaya
Matsutso nemashizha awo akafa
Mwaka wemashizha akapararira munzira dzepamugwagwa wasvika uye webhu izere nekutsvaga kunoenderana ne "mabhuku akakurudzirwa kudonha". Kufunga nezvevanoverengera vaverengi vanoda kuzvinyudza mune dzakanaka nyaya, kwakasarudzika kusarudzwa kwemabhuku kwakagadzirwa izvo zvisingafanirwe kushayikwa mune chero muunganidzwa uye izvo zvinonyatso kuperekedza mwedzi isati yasvika yechando.
Pano iwe unowana kubva kumabasa akakonzera mhirizhonga muna2021, kune vamwe akachengetedzwa nekufamba kwenguva nekuda kwechirongwa chavo chakanakisa uye nekugadzika. Mazita ekuremekedza sei Mutsara wemoto (2020), naArturo Pérez Reverte; Hafu mambo (Gungwa rakaputswa I, 2020) naJoe Abercrombie o Dzvuku Mambokadzi (2018), naJuan Gómez-Jurado, kutumidza mashoma.
1 Pakati pehusiku (2021)
3 Vane zana (100)
4 Iyo Ickabog (2020)
5 Mutsara weMoto (2020)
6 Rudzikinuro (2020)
7 Amakuru mu Gitondo (2018)
Pakati pehusiku (2021)
Ndiyo yekupedzisira notaburani neSpanish Mikel Santiago; rakabudiswa muna June 2021. Zvakare munyori anounza nyaya isinganzwisisike yakagadzirirwa mudhorobha rekunyepedzera reIlumbe, iri muBasque Nyika. Iyo rangano inovhurika pakati peyakafa yerima uye nechipo chisingapunyuke mhedzisiro yemazuva erima iwayo.
NeMugovera Gumiguru 16, 1999 yaive yekupedzisira kutamba kwechikwata che rock rock Los Deabruak - boka ra Diego Letamendia neshamwari dzake-. Husiku ihwohwo hwakaratidzirwa nechiitiko chakachinja magumo emunhu wese: Lorea —Musikana waDiego— Akanyangarika. Kunyangwe hazvo kuongororwa kwakazara kwemapurisa, hapana zvisaririra zvekuwanikwa kwemukadzi mudiki zvakawanikwa.
Makore makumi maviri gare gare, Diego Leon -Ndiani akange atevera basa rake ega- dzokera kuIlumbe. Chikonzero chekudzoka ndeche kutaura zvakanaka kuna Bert, shamwari yekare (aimbova nhengo yebhendi) akafira mumoto unotyisa.
Mushure memariro, pakati pehurukuro dzevanozivana, fungidziro inomuka kuti zvimwe zvakaitika zvakaitika nemaune. Izvi, zvakare, zvinomutsa zvakawanda zvisingazivikanwe, uye chimwe chinonyanya kutyisa ndechekuti kufa kwaBert kwakabatana nekutsakatika kwaLorea ...
Pakati pehusiku (Iyo rangano)
Hafu mambo (2014)
Iwo mutambo wekufungidzira wakanyorwa naJoe Abercrombie -Iyo inotanga iyo trilogy Gungwa Rakaputsika—. Shanduro yaro yepakutanga yakaburitswa muna 2014, nepo shanduro yayo yeSpanish yakapihwa gore rakatevera. Nhoroondo inoitika muThorlby uye inotenderera pahutongi hweGettland.
Muumambo hwevarwi, Yarvi —Wechipiri mwanakomana waMambo Uthrik— akatambura nekurambwa hupenyu hwake hwese kubudikidza have deformation muruoko rwako. Kuremara kwake kwepanyama kunomukurudzira kuti adzidzise sechechi, kuti ave chikamu chevafundisi. Asi mufananidzo wese unoshanduka panourayiwa baba vake nemunin'ina wake. Mukumuka kwechiitiko chine njodzi ichocho, Yarvi anofanira kutora chigaro.
El mudiki uye asina ruzivo mambo anofanirwa kutora mutoro mukuru munzvimbo ine hukasha uye isina basa, inotongwa nehutsinye nekutengesa - izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kuva nevatsigiri. Mune ino panorama yakaoma (kucherechedzwa nekuganhurirwa nehurema hwake), Yarvi anofanira kusimbisa ruzivo rwake kuti abudirire muhondo yega yega.
Hafu mambo (Gungwa ...
Munyori anozivikanwa weNew York Kass Morgan anotiunzira nyaya inonakidza yepashure-apocalyptic iyo inoratidzira zvakashata hunhu hwevanhu. Mune ino dystopia - zvakajairika zviwanikwa mukati medzidziso dzake-, Vanodzingwa zana vanosarudzwa kuti vaone kana Pasi rakakodzera kugarwa zvakare
Pasi rakatambura hondo inoparadza yenyukireya izvo zvakaparadza huwandu hwevanhu. Kwemakore, avo vakapona vakararama nezvikepe iyo inobhururuka pamusoro pechadenga pamusoro pehuturu hutete iyo yakakomberedza nyika. Nekuda kwekuwedzera kwevashandi, mamiriro acho anosvika pamuganhu: izvo zvinopihwa zvaneta uye, nekudaro, hukama hwakamanikidzwa.
Vatongi vanosarudza kutumira boka rekutsvaga kuti riongorore mamiriro ePasi uye kana zvichikwanisika kuti ugaremo zvakare. Sekuchenesa uye kudzivirira kurasikirwa "kwakakosha" muhuwandu hwevanhu, basa iri rakapihwa 100 vechidiki vanodarika. Mushure mekudzika kwakaoma, vechidiki vanozviwana vari munzvimbo yemusango asi yakanaka chaizvo, mamiriro ayo mukuwedzera mukugadzirisa, vanofanirwa kudzidza kugara pamwe kana vachida kurarama.
The zana (100)
Iyo Ickabog (2020)
Mushure mekusavapo kwemakore gumi nematatu mumhando yezvinyorwa zvekufungidzira-mushure mekuburitsa Harry Potter uye iyo Inouraya Hallows muna 2007-, JK Rowling anodzoka nenyaya nyowani. Mumutambo uyu, munyori anokunda mubairo anotora vaverengi vake kuenda kunyika dzeCornucopia uye ipapo anokwevera zano rinotenderera "chokwadi uye kushandisa zvisizvo simba" - sekureva kwaRowling iye.
Munyori JK Rowling.
Zvese zvaive kuwanda uye mufaro muhumambo hweCornucopia. Mutungamiri waro aive mambo akanaka uye aidiwa nevose uye vagari varo vakasimudzira maoko avo akasimba; vakaita zvinofadza izvo zvakazadza nemufaro kune avo vanhu vemunyika nevashanyi.
Zvisinei,, Kure nekoko, mumatope kuchamhembe kweumambo, mamiriro akanga akasiyana. Zvinoenderana nengano yaishandiswa kutyisidzira vana, chikara chekare chinonzi Ickabog chakagara munzvimbo dzakashata. Zvino, zano racho rinoitika zvisina kutarisirwa apo izvo zvinofanirwa kuve ngano zvinotanga kuzadzika ...
Iyo ickabog (Salamander ...
Ndiyo yekupedzisira nhoroondo yenhoroondo yemunyori Arturo Pérez Reverte. Inobhadhara mutero kune vese avo vakarwa uye vakapa hupenyu hwavo muSpanish Civil War. Munyori akaita basa rakanakisa iro rinoratidzwa nemabatiro aakaita kubatanidza fungidziro nezvakanaka zvinyorwa. zvakaitika panguva iyoyo inoshamisa. Kwete pasina basa iro rakagamuchira Mubairo weVatsoropodzi mugore rimwe chete rekuburitswa kwaro.
Izvo zvese zvinotanga pahusiku hwa Svondo, Chikunguru 24, 1938 when zviuru zvemasoja zvakafora kunomira muCastellets weSegre. Varume nevakadzi vaive veXI Mixed Bridada yeHondo yeRepublic. Zuva rakatevera rakatanga kumwe kurwisa kwakazara ropa pavhu reSpain: iyo hondo yeEbro.
Iyo inoverengeka yemhosva yakanyorwa neSpanish Fernando Gamboa. Iyo zano inosanganisa zviitiko chaizvo uye mhedzisiro yazvo mune ramangwana rekunyepedzera muna 2028. Nyaya yakaiswa muBarcelona uye inotanga muna Nyamavhuvhu 17, 2017, pakaitika kurwisa kwemagandanga kuLas Ramblas -Ichokwadi chakasiya vanhu vanopfuura gumi nevashanu uye vakawanda vakakuvara.
Mamwe masikati muna Nyamavhuvhu kombi yakatumira boka revanhu muLas Ramblas muBarcelona. Mamita mashoma kubva kune wechidiki Nuria Badal, who, pakati pekupopota uye nyonganiso, anoziva kuti aigona kunzvenga zvese zvakaitika. Asina kuita sarudzo chaiyo munguva, yakaguma nemhedzisiro yakakomba inozoshandura hupenyu hwake neramangwana renyika.
Makore gumi nerimwe gare gare Nuria ave mupurisa yeBarcelona yakadzikama. Zviito zvehuori, kutamira kune dzimwe nyika, vezvematongerwo enyika vane hunyanzvi uye hugandanga hwashandura guta. Mushure mekupfuura nenyaya inoshungurudza, hupenyu hwemukadzi mudiki hunotora shanduko isingafungidzike. Kubva ipapo anofanirwa kusangana nemigwagwa yakati wandei kuti aponese hupenyu hwake pamwe nerudzi rwese.
RUDZIKINURO: Iyo novel ...
Dzvuku Mambokadzi (2018)
Ndicho thriller yakanyorwa nespanish Juan Gómez-Jurado. Nenyaya iyi, munyori anotanga trilogy nezve zviitiko zvaAntonia Scott. Iyo zano yakaiswa muMadrid uye inoyemura mukadzi anonzwisisa akagadzirisa mhosva dzakakosha asina kuve mupurisa.
Quote naJuan Gómez-Jurado.
Antonia scott Iye mupoteri mumusha wake muLavapiés mushure mechiitiko chemhuri chakamushandura kuva mumiriri. Inspector anosvika panzvimbo iyoyo Jon Gutierrez; chinangwa chake ndechekuti mutengi agamuchire nyaya nyowani kuMadrid. Mushure mekutaurirana uye kuwana mvumo, zvese Ivo vanopinda kuferefeta izere nezvakavanzika, vakapfuma vakaurayiwa uye labyrinth yezvakavanzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Yakakurudzirwa mabhuku ekuwa
Kusuruvara, naDaniel Martín Serrano. Ongorora
Helena Tur. Kubvunzana nemunyori weRopa Rakaipa